Ikhabhathi ye-Evergreen 3
Reliance, Tennessee, United States
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguPatty
Le khabhinethi irhangqwe yimithi ekwihlathi leSizwe leCherokee.
Ifanelekile kusapho kunye nomhlobo ukufumana iindibano okanye ukonwabela ukuba wedwa nomntu okhethekileyo.
Inamagumbi okulala ama-2, indawo yokuhlala eyaneleyo, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, indawo enkulu yomlilo, ivaranda enkulu enezitulo ezishukumayo, ujingi, kunye ne-BBQ grill. Ibhafu enkulu eshushu ikwiveranda eyahlukileyo egqunyiweyo.
Le ndlwana ine-WiFi kodwa ngenxa yobuninzi bemithi iyacotha.
Musa ukubala kuyo nantoni na ngaphandle kwemidiya yoluntu kunye nee-imeyile.
Nceda ugcine engqondweni, le yindlwana yasehlathini, entabeni. Le yindawo yokonwabela indalo kwaye ukhulule. Zilungiselele akukho nkonzo yeseli nangona kukho iWiFi.
Eli lihlathi elishinyeneyo. I-WiFi iyacotha ngoko ungathembeli kumdlalo we-intanethi, ustrimisho, okanye ukubukela uYouTube kodwa ilungile kuFB kunye nee-imeyile.
Kukho iTV, isidlali seDVD, kunye neVHS player kunye neentlobo ngeentlobo zeemuvi onokuzibukela. Le khabhini ayinazo izikhululo zikamabonakude zokubukela.
Imidlalo ikhona yolonwabo losapho.
Yiza ulungele ukukhupha iplagi, uhlale ngaphandle komlilo okanye ngaphakathi ngaseziko, dlala amakhadi, ufunde incwadi emnandi, uthathe uhambo, udada umlambo, emva koko uphumle kwi-tub eshushu. Ukujonga inkwenkwezi apha ngamava amangalisayo ngokwawo.
Intaba iza nendlela yokuhamba entabeni, amaqhuma athile, igrabile kunye nokujika. Ngelixa zonke iintlobo zezithuthi ziyenza ngaphandle kwengxaki, nceda ulungiselele ukuqhuba ngokuzithemba. Iifoto zendlela yokungena zikolu luhlu. Ukuba kufuneka ukhethe phakathi kwemoto yezemidlalo okanye iJeep, nceda uqhube iJeep. Niya kuzonwabela nangakumbi!
Iilinen ezisisiseko zinikezelwa, amaphepha kunye neetawuli. Nceda uze neetawuli ezongezelelweyo zokuya emlanjeni kunye nokusebenzisa ibhafu eshushu.
Ikhitshi inayo yonke into oyifunayo, iintsapho ezininzi ziza kwiholide kwaye zinayo yonke into efunekayo ukulungiselela imikhosi yeeholide.
Sinayo yonke into oyifunayo ukuze ukonwabele ukuhlala okumangalisayo kokuphumla kwaye sikhathalela iindwendwe zethu ngokungathi zisapho. Siyakuthanda ukudibana nabantu abatsha kwaye singathanda ukuba nawe.
Ibekwe kumbindi phakathi kwechibi iOcoee kunye noMlambo iHiwassee. Ukukhwela amanzi amhlophe, ukudada komlambo, ukuloba, ukukhwela isikhephe, ukukhwela intaba, ukukhwela ihashe ngasemva, ii-wineries, zonke zingaphakathi kwemizuzu. I-Chattanooga yindlela emfutshane yokuqhuba kunye nezinye iindawo ezidumileyo zabakhenkethi.
Umbuki zindwendwe ngu- Patty
Indlu yam iphantsi kwenduli esecaleni kwendlwana kwaye yahlulwe yimithi emininzi ngoko ke ikhabhathi ibucala kakhulu. Ndiyafumaneka kwiindwendwe ukunceda ukwenza iiholide zabo zibekhethekileyo kangangoko.